Però: Korontana taorian’ny horohorontany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2018 1:08 GMT
Niteraka hetsika marobe teo amin'ireo bilaogera Peroviana ny horohorontany goavana vao haingana izay namely an'i Però. Ny sasany nanoratra sy nanadihady ny zavatra tsapan'izy ireo tamin'ny fisian'ny horohorontany, raha nikasa hampahafantatra ny namana Peroviana kosa ny hafa mba hiaro azy ireo amin'ny fampahalalam-baovao diso. Na dia izany aza, maro no namaly tamin'ny fangatahana firaisankina tamin'ny alalan'ny fanentanana mikasika ny fomba hanampiana.
Satria andro maro izay no lasa, misaintsaina ny fihetsiky ny governemanta sy ny sasany amin'ireo tranga mahatsiravina ao amin'ny fireneny ireo bilaogera ireo.
Pueblo Vruto [ES] sahiran-tsaina noho ny fihetsiky ny sasany, izay niezaka nanararaotra nandritra ity fotoan-tsarotra ity.
Mampalahelo ny mahita olona sasantsasany izay manararaotra ny fanaintainan'ny hafa. Tsy miresaka momba ireo mpivarotra na mpandraharaha tsy menatra mampiakatra avo ny vidin'entana aho… Miresaka momba ireo “tsy fantatra anarana” aho (satria matetika izy ireo mampiasa anaran-diso) izay mody milaza ny tenany fa manampahefam-panjakana, na mpikambana na “mpiara-miasa” amin'ny fikambanana toy ny ny Fiarovana Sivily, ny Vokovoko Mena, ny Fiangonana, sns. mba hangatahana vola fanampiana. Tsy vitan'ny hoe manararaotra mandritra ny “fotoanan'ny fitoniana” amin'ny fangatahana tsy ara-drariny fanampiana na manao mpangataka izy ireo, fa koa manararaotra ireo antso ho amin'ny firaisankina amin'ny fiasàna mandritra ireo fotoan-tsarotra ireo.
Gran Combo Club [ES] manoratra momba ireo vaovao voaray avy amin'ny namana sy havana ao amin'ny tanànan'i Ica voakasiky ny horohorontany.
Nisy namako iray niantso ahy ary nilaza tamiko fa nahazo antso avy amin'ny havana any Ica izy, izay mahatsiravina ny toe-draharaha. Mbola tsy manana rano izy ireo, na herinaratra ary mikatona aloha ny zava-drehetra, eny fa na dia ny fivarotam-panafody aza. Nilaza taminy ihany koa ilay havana fa nitondra trano lay tao an-kianja ny filoha Alan (Garcia), ary rehefa niverina izy dia tsy teo intsony ireo. Toa afindrafindran'izy ireo toerana izany.
C.J. Schexnayder ao amin'ny Andean Currents manoratra fa misy tatitra momba ny fandrobana any amin'ireo tanàna voakasika indrindra ary mikasa handray fepetra ny governemanta:
Sahirana ireo tompon'andraiki-panjakana amin'ny famerenana ny filaminana satria mandroba eny amin'ny arabe sy ny kamiao mpitondra fanampiana ireo sisa velona matin'ny hanoanana sy ireo jiolahy an-dalambe. Nanome baiko ho an'ireo miaramila an'arivony tao amin'ny faritra ny filoha Alan Garcia mba hamerina ny filaminana ao an-tanàna sy ny làlambe avy any Lima.
Tan sólo unas burbujas [ES] nanoratra momba ny fandrobana izay nitranga.
Raha nanoratra ity lahatsoratra ity aho dia mbola tsy nisy ny fandrobana ny tsena sy ny kamiao. Ny hitanay tao amin'ny faritra ravan'ny loza dia: ireo olona kivy mitazam-potsiny ny fahatongavan'ny fiaramanidina iraisam-pirenena mitondra fanampiana, nefa mbola tsy manana rano na fanampiana izy ireo. Azo antoka fa misy vondrona manararaotra ny toe-draharaha, saingy tsy mino aho fa jiolahimboto araka ny eritreretin'ny sasany ireo olona ireo.
Farany, Pospost [ES] miverina miaraka amin'ny vaovao mahabe fanantenana ao anatin'ny tantaran'ny korontana sy ny tsy filaminana.
Niova ny fiainana tao Pisco. Roa andro taorian'ny horohorontany mahery vaika izay nanozongozona io tanàna io sy namoizana olona an-jatony, teraka ny zazakely voalohany, manome fanantenana ny tanàna.